लोकतन्त्रको विरुद्धमा दुइ तिहाइको दम्भ: डा. खड्का
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री डा. नारायण खड्काले सत्तारुढ दल नेकपाको दुइ तिहाईको दम्भ लोकतन्त्रका विरुद्धमा अघि वढेको बताएका छन् । यही दम्भका कारण सरकारको ६ महिनाको अवधिले जनताको उत्साह समाप्त बनाएको उनको भनाइ छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा
कानुनमा खोट छैन,डाक्टरले नयाँ कानून पढ्नुपर्यो: सांसद बिडारी
काठमाडौं । नयाँ कानुनको सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभाका सांसद एवम् कानूनविद् रामनारायण बिडारीले नयाँ कानूनमा खोट नभएको भन्दै सकारात्मक रुपमा लिन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बिडारीले मुलुकी ऐनबारे
कर बृद्धिको कर्मचारीद्वारा वचाव
काठमाडौं । सरकारले कर बढाएपछि विषयको चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारी कर्मचारीले भने त्यसको वचाव गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव पुरुषोत्तम नेपालले स्थानीय तहमा लगाईएको करको बारे गलत प्रचार भएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सह–सचिव नेपालले
जाजरकोटमा वाढीको वितन्डा, खोलाले बगाएर एक जनाको मृत्यु
भेरीनदी थुनिँदा तीन घर र ६ ओटा टहरा बगे, करोडौंको क्षति दिपेन्द्र शर्मा/सुर्खेत, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा वाढीका कारण करोडौंको क्षति भएको छ । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित नलगाड नगरपालिकाको २, ३ र ४ वडामा गएरातिको वाढीले करोडौँको पुर्याएको हो । झुप्रा
सुब्बाले १० हजार घुस मागेपछि...
काठमाडौं । कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय, गड्डाचौकीमा कार्यरत नायव सुब्बा रामप्रसाद भट्टराईले १० हजार घुस लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ । भारतको बनवासा नाकाबाट व्यापारिक प्रयोजनका मालसामान ओसार्दा भन्सार शूल्कमा सहुलियत गरिदिने प्रलोभनमा सेवाग्राहीबाट उनले उक्त
विप्लवको नेपाल बन्दः शिक्षण संस्था ठप्प, जनजीवन प्रभावित
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले गरेको नेपाल बन्दका कारण राजधानी काठमाडौं लगायत देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दको खासै प्रभाव नरहेको प्रहरी प्रवक्ता सैलेश थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था गरिएकोले ढुक्कसँग आफ्नो दैनिक कार्य
धरापमा हेमानन्दको शंकराचार्य पद
अभिषेक जोशी/काठमाडौं, नेपाली साध्वी हेमानन्द गिरी (हेमा ढुङ्गाना) शंकराचार्य पद धरापमा परेको छ । अखिल भारतीय विद्वत परिषद्को सिफारिशमा शंकराचार्य बन्न लागेकी गिरी छत्री तथा दण्ड ग्रहण गर्ने तयारीमा जुटेकी छिन् । तर, उनको योग्यतामाथिकाे विवाद चुलिएपछि उनी शंकराचार्य बन्ने/नबन्ने दुविधा बढेको छ । शंकराचार्य
२ नं प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीले गरे अदालत समक्ष आत्मसमर्पण
महोत्तरी । २ नं प्रदेशका सामाजिक विकास राज्य मन्त्री अभिराम शर्माले महोत्तरी जिल्ला अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन् । मधेश आन्दोलनका क्रममा २०७२ सालमा सहायक प्रहरी निरीक्षक थमन विकको हत्या अभियोग लागेका शर्माले सोमबार अदालतमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका हुन् । यस अघि उनलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेकोमा चर्को
शंकराचार्यको महिमा सरकारले बुझेनः हेमानन्द गिरी
काठमाडौं । अखिल भारतीय विद्वत परिषद् र धर्म महामण्डलद्वारा प्रथम महिला जगतगुरु शंकराचार्य घोषणा गरिएकी हेमानन्द गिरीले आफ्नोबारे नेपालमा गलत प्रचार गरिएको गुनासो गरेकीछिन् । शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले केही रोगी मानसिकता हिन्दु कथावाचक पण्डितहरूले आफ्नाबारे गलत प्रचार गरेको उनको
मौसम विज्ञान भन्छःकतै भारी वर्षा कहि हल्का
काठमाडौं । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशभरको मौसममा परिवर्तन हुने अनुमान गरेको छ । शुक्रबार गरेको पूर्वानुमान अनुसार कतै भारी वर्षा हुने उल्लेख छ भने कतै फाटफुट वर्षा हुने बताइएको छ । भारी वर्षा हुने स्थानमा नदीको वहाव बढ्ने भएकाले सचेत रहन सबैमा अपील पनि गरिएको छ । शुक्रबार–दिउँसो र राति देशभर सामान्य
जाजरकोटका पहिरो पीडितलाई राहत वितरण
सुर्खेत/जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जाजरकोटका पहिरो पीडितलाई जनही रू. १ लाख राहत वितरण गरेको छ । आइतबार जाजरकोट सदरमुकाम खलंगाको ठाँटीमा गएको पहिरोमा परेर आफन्त गुमाएका र विस्थापित परिवारलाई राहत वितरण गरिएको हो । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितबहादुर बस्नेतले पीडित परिवारलाई जनही एक लाखको चेक
वरिष्ठ चित्रकार मनुजबाबु मिश्रको हृदयाघातबाट मृत्यु
काठमाडौं । वरिष्ठ चित्रकार एवं साहित्यकार मनुजबाबु मिश्रको हृदयाघातबाट मृत्यु भएको छ । गएराती सुतेकै अवस्थामा उनको निधन भएको पारिवारिक श्रोतले बताएको छ । ८३ बर्षीय मिश्रलाई उच्च रक्तचापको समस्या थियो । मिश्र दुई दशकदेखि प्रायः सार्वजनिक कार्यक्रममा नजाने आफ्नो निवास (गुफा) बसेका थिए । उनको आत्मकथा
नेपालमा व्यवसायिक बन्दै ‘खेलाडी’ परेवा पालन
यादव थपलिया/काठमाडौं, शौखका निम्ति सुरू भएको क्यारियर पिजन (परेवा) पालन अहिले नेपालमा व्यावसायिक बन्दै गएको छ । सुरु–सुरुमा प्रतिस्पर्धात्मक उडानका निम्ति प्रयोग हुँदै आएको ‘खेलाडी’ परेवा पालन अहिले व्यवसायिक बन्न थालेको हो । नेपालमा काठमाडौँका गोरख शमशेर राणाबाट थालनी भएको परेवा पालनले अहिले
भेटिएन गोविन्दको लाश
दिपेन्द्र शर्मा/जाजरकोट, जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा आइतबार बिहान गएको पहिरो बेपत्ता गोविन्द परियारको लाश अझै भेटिएका छैनन् । तीन दिन बित्दा पनि अझै उनको लाश भेटिएको छैन । कुशे गाँउपालिका– ५ जाजरकोटका ८ वर्षीय गोविन्दको लाश खोजी कार्य आजपनि जारी रहेको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले
बन्दले पूर्वका ९ जिल्लाको जनजीवन प्रभावित
इलाम । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आह्वान गरेको बन्दका कारण पूर्वी नेपालका ९ जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। बन्दका कारण मेची राजमार्गमा सवारी साधन थोरै चलेका छन भने शिक्षण संस्था कलकारखाना केहीमात्र सञ्चालन भएका छन् । बन्दले इलाम, पाँचथर, झापा, ताप्लेजुङ, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभा जिल्लाको
जाजरकोट । जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा आइतबार बिहान गएको पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुगेको छ। पहिरोले पुरेका ८ जनाको शव निकालिएको छ। १ जना अझै बेपत्ता छन्। एक जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। भेरी नगरपालिका ६ गंगटियाका खड्गबहादुर लुहारको जीवितै उद्धार गरिएको हो। मृत्यु हुनेमा खड्गबहादुर लुहारकी
चौबाटोका लोकल कुखुरा व्यापारीलाई अमेरिका नि यही जापान पनि यही
सरस्वती ढुङ्गाना/काठमाडौं, शिक्षित हुन वा अर्ध शिक्षित नेपाली युवाको एउटै गुनासो छ, देशमा रोजगारी नै पाइएन । सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गरिदिएन । त्यही कारण कामको खोजीमा कति युवा युरोप/अमेरिका छिरेका छन भने लाखौं नेपाली खाडी मुलुकको चर्को घाममा सस्तो श्रम बेच्न वाध्य भएका छन् । तर, मेहनती र लगनशील
जाजरकोटमा पहिरोले पुरेर ५ जनाको मृत्यु
जाजरकोट । आइतबार रातीको अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोमा परेर जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–३ ठाँटीबजार नजिकै एकै परिवारका ४ जनासहित ५ जनाको मृत्यु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले ५ पहिरोमा ५ ओटा लाश प्राप्त भएको भन्दै सनखत हुन बाँकी रहेको बताए । पहिरोले तीर्थ बोहरा र गोपाल सुनारको घर
कांग्रेस नेता आचार्यको स्मरणमा रङ्गशाला निर्माण गरिने
काठमाडौं । कांग्रेस नेता स्वर्गीय सुदर्शन आचार्यको स्मरणमा राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माण गरिने भएको छ । आचार्यको ४५ औं पुण्यातिथीका अवसरमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ७ का स्थानीय निकाय र तारकेश्वर नगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् । काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिका– ५ का गोलढुङ्गा
संसदीय सुनुवाईबाट प्रधानन्यायाधीस जोशी अस्वीकृत
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको छ। समितीको शुक्रबार बसेको वैठकमा दुई तिहाइ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेपछि जोशी अस्वीकृत भएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरेको थियो । जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सभापतित्व
कक्षा १२ को नतिजा अहिले ९.३० बजे सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा बिहीबार (आज) बिहान ९.३० सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । नतिजा प्रकाशनका लागि परीक्षा बोर्डको बिहान ८.३० बजेदेखि बसिरहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड काठमाडौं कार्यालयलका प्रमुख सन्तोषकुमार अर्यालका अनुसार नतिजा प्रकाशनका लागि बोर्ड बैठक जारी छ,
४८ एसपीको एकैपटक सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ४८ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरुको एकैपटक सरुवा भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी महानिरीक्षकको बुधबार गरेको निर्णय अनुसार साउन महिनाको तलब भत्तासमेत हाल सरुवा भएको स्थानबाट खान पाउने गरी सरुवा गरिएको उल्लेख छ ।
ओली सरकार विचौलियाको कब्जामाः नयाँ शक्ति
काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालकी केन्द्रीय सदस्य, राज्य व्यवस्था तथा संसदीय मामिला विभागकी संयोजक कल्पना धमलाले वर्तमान सरकारलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिएकी छिन् । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा राज्य व्यवस्था तथा संसदीय मामिला विभाग र विज्ञ परिषद्ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीस जोशीलाई राजीनामा गर्न सुझाव दिए
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई राजीनामा गर्न सुझाव दिएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणको विषय विवादमा आएकाले राजीनामा दिनु राम्रो हुने सल्लाह दिएका थिए । ‘जवाफमा जोशीले
प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम अस्वीकृत भए संवैधानिक परिषदमाथि प्रश्न उठनेःकेसी
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेमा संवैधानिक परिषद्माथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन् । यदि जोशीलाई समितिले अस्वीकार गरेमा संवैधानिक परिषद्को अपमान हुने र नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री
जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न सकस
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा दिपकराज जोशीको अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक फेरि सरेको छ। बैठक सरेसँगै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न सकस भएको छ । खास गरी सत्तासिन नेकपा निकट नेताहरूले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन लविङ गरिरहेका छन् । समितिको सोमबारको वैठकले जोशीको सुनुवाईको निर्णय गर्ने
इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प १० जनाको मृत्यु, सयौं घाइते
काठमाडौं । इन्डोनेसियाको एक प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्रमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । आइतबार स्थानीयसमयअनुसार बिहान सात बजे ६.४ म्यानिच्युटको भूकम्पको धक्का महशुस गरिएको हो । भूकम्पमा परी कम्तीमा १० जना मानिसहरुको ज्यान गएको बताइएको छ । इन्डोनेसियाको लोमबोक टापुमा सो भूकम्पको धक्का महशुस गरिएको हो
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छःरायमाझी
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री एनपी साउदले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा अहिलेको मुद्दा नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘अहिलेको मुद्दा भनेको त सबै नागरिकले शिक्षाको समान अवसर पाउनुपर्छ, सबै नेपालीहरुले आधारभुत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य
तीन दिन देशभर भारी वर्षाको सम्भावना, सर्तक रहन अनुरोध
काठमाडौं – आगामी ३ दिनसम्म देशको अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम खालको तथा केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले ३ दिनको मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभर समान्यदेखि पूर्ण बदली रही अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना औंल्याएको
‘टुक्रे’ कागजमा कर असुल्दै हुम्लाको यारी भन्सार
दाने बोहरा/हुम्ला हुम्लाको यारी भन्सार कार्यालयले व्यापारीबाट टुक्रे कागजमा लेखेर राजस्व असुल्दै आएको छ । जिल्लाको उत्तरी हिल्सा नाकाबाट तिब्बत पैठारी हुने सामानमा लाग्ने कर भन्सार कार्यालयले टुक्रे कागजमा लेखेर असुल्ने गरेको हो । नगदी रसिदको प्रयोग नहुँदा राजस्व रकम हिनामिना हुने कर्मचारी बताउछन्